Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Doha mankany Gothenburg izao tsy mijanona amin'ny Qatar Airways
Qatar Airways dia hanomboka sidina dimy heny isan-kerinandro avy any Doha mankany Gothenburg, Suède manomboka amin'ny 12 Desambra, ka io no vavahady faharoa any Suède aorian'ny Stockholm.
Sidina dimy isan-kerinandro avy any Doha mankany Gothenburg no harahina amin'ny fiaramanidina Boeing 787-8, misy seza 22 ao amin'ny Class Business sy seza 232 ao amin'ny Economy Class.
Ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Qatar Airways, Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: "Faly be izahay manambara ny fandefasana serivisy mivantana any Gothenburg, vavahady faharoa hidiranay any Suède. I Gothenburg dia tanàna manintona izay manana tolotra be dia be na mpivahiny sy fialamboly. Ity zotra mivantana vaovao ity dia mampiseho ny fahavononantsika hanitatra ny fisiantsika any amin'ireo firenena Nordic, tsena iray tena lehibe ho antsika ary hampifandray bebe kokoa ireo toerana ireo amin'ny tambajotranay manerantany. Manantena ny hampahafantatra ireo mpandeha eran'izao tontolo izao amin'ity tanàna tsara tarehy ity izahay. ”
Andriamatoa Jonas Abrahamamsson, Ny Lehiben'ny Executive Executive any Swedenavia dia nilaza hoe: "Suède no toekarena lehibe indrindra any Scandinavia, ary amin'izao fotoana izao dia io ihany koa no matanjaka indrindra any Eropa. Ny làlana mivantana vaovao dia singa iray lehibe mampandray anjara, satria manatsara ny fifandraisana amin'ny tsena izay manandanja amin'ny sehatry ny orinasa Suède ary manintona ny renivohitra sy ny fahalalana any amin'ny faritra. Ity zotra mivantana ity dia vokatry ny fiaraha-miasa nahomby izay nanehoanay Qatar Airways ny mety ho tsena any andrefan'i Suède miaraka amin'ny faritra. Noho izany, fifaliana lehibe no niarahan'ny Swedenavia sy ny tany andrefan'i Suède niarahaba an'ity zotram-piaramanidina Atsinanana afovoany ity tany amin'ny seranam-piaramanidina Gothenburg Landvetter. ”
Gothenburg koa dia manolotra zava-mahasarika voajanahary mahafinaritra maro ho an'ny mpitsidika ankafiziny, manomboka amin'ny farihy mamirapiratra sy harambato granita, hatrany amin'ireo tanàna manjono tsara tarehy. Ny nosin'i Bohuslän, izay mamelatra ny morontsiraka andrefana, dia nantsoina hoe 'iray amin'ireo faritra be ala efitra folo sisa eto amin'izao tontolo izao' ary malaza ho tokan'azy. Ny mpitsidika dia afaka mitsidika an'i "Universeum" an'i Gothenburg, izay manolotra ala mando, aquarium goavambe ary karazam-biby hafakely sy zavamaniry hafakely ao ambanin'ny tafo iray.
Qatar Airways dia nandefa sidina nankany amin'ny seranam-piaramanidina Arlanda any Stockholm tamin'ny taona 2007. Ny zotra Stockholm-Doha, izay miasa sidina 14 isan-kerinandro, dia Dreamliner 787 mivelatra miaraka amin'ny seza 22 ao amin'ny Class Business sy seza 232 ao amin'ny Economy Class.